RD an’i Congo: Lahatsary Nanampy Handetehana An’i Thomas Lubanga Aminà Heloka An’ady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Marsa 2012 5:30 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Español, عربي, Български, Italiano, Dansk, Swahili, English
Ity lahatsoratra ity dia mifototra amin'izay votoaty navoaka voalohany tao amin'ny WITNESS.
Ny 14 Martsa 2012 ny Fitsaràna Iraisampirenena Momba ny Heloka Bevava dia nahatratra an'i Thomas Lubanga, mpitarika mpihoko fahiny tao atsinanan'i Congo, voaheloka ho nampiasa ankizy tamin'ny ady mitam-piadiana – heloka an'ady. Io dia dingana iray goavana ho an'ny fitsarana manerantany , ho an'ireo nizaka ny mafy tao amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Congo (RDC) ary ho an'ny video for change, na ny lahatsary ho an'ny fanovàna.
Ao atsinanan'ny Repoblika Demaokratikan'i Congo, izay nisian'ny ady an-trano naomoizana aina maherin'ny efatra tapitrisa, ankizy tena mbola zaza hatramin'ny enina taona no angonin'ireo milisy sy ampianarina hamono. Novinavinaina fa ankizy, ny ankamaroany dia eo anelanelan'ny 8 sy 16 taona eo, no manome ny 60 % -ny mpiady any amin'ny faritra.
Lahatsary iray maharitra 5 minitra avy amin'ny WITNESS nomeny lohateny hoe “A Duty to Protect” (Adidy hiaro) no nojerena tany ampiandohan'ny fitsarana, ary nomen'ny mpitsara lanja tokoa ho isan'ny nanana ny anjara noraisiny tamin'ny didy navoaka sy ny fanomezana porofo hafa hita maso. Izy io dia milaza ny tantaran'i Mafille sy January, ankizivavy roa izay noraofina nampidirina ho miaramila. Ilay lahatsary dia mitodika amin'ny fiantraikan'ny fakàna ireny ankizy ireny ho miaramila eo amin'ireo fianakaviany sy ny fiarahamonina manodidina amin'ny ankapobeny.
Mpitantana iray ao amin'ny WITNESS i Bukeni Waruzi, izay avy any amin'ny faritra atsinanan'ny RDC sady efa mpiaro ny zon'olombelona hatry ny ela, no tao amin'ny fitsaràana tao La Haie mba hiaino ny valim-pitsarana. Hita anatinà Fanontaniana&Valiny miaraka amin'ireo mpanao gazety izy taorian'ilay didim-pitsaràna tamin'ny 14 Martsa manazava ny lanjan'ilay lahatsary teo amin'ny fitsarana, ankoatry ny zavatra hafa.
Ao anatin'ny lahatsary etsy ambany, nakarin'ny WITNESS tao amin'ny Youtube tamin'ny 13 Martsa, ny andro nialoha ny fitsarana, i Bukeni dia miresaka amin'i Madeleine, ankizy iray miaramila teo aloha tany atsinanan'ny RDC ary nesorina tsy ho amin'izany teo amin'ny faha-15 taonany ary nisy nanangana nony avy eo. Tamin'ny 2007, nijor ho vavolombelona teo anatrehan'ny Firenena Mikambana izy mba hizara ny zava-niainany tamin'ny naha-ankizy miaramila azy.
Bukeni sy Madeleine dia mifanakalo hevitra momba ny fanantenan-dry zareo ny amin'izay ho vokatry ny fitsarana an'i Lubanga sy ny fanantenana fa homena ireo ankizy miaramila ny rariny tokony ho azy, na aiza izany na aiza eto an-tany
Jereo misimisy kokoa ato ny momba an'i Bukeni sy ny asan'ny WITNESS’ mikasika ireo ankizy miaramila